Rivaldo oo si cad u sheegay kooxda uu u baahan yahay Neymar si uu ugu guuleysto Champions League – Gool FM
(Yurub) 29 Maajo 2019. Halyeeyga reer Brazil iyo kooxda Barcelona ee Rivaldo ayaa u arka in xiddiga ay isku wadanka yihiin ee Neymar Jr uu u baahan yahay dib ugu soo laabashada markale naadiga reer Catalonia.
Rivaldo ayaa qoraal uu soo dhigay boggiisa rasmiga ah ee Twitter-ka wuxuu ku qeexay in 27 jirka reer Brazil iyo kooxda PSG uu u xiisay naadiga Barcelona, si uu ugu guuleysto Champions League markale.
Hadaba qoraalka uu halyeeyga reer Brazil iyo kooxda Barcelona ee Rivaldo ku soo qoray boggiisa rasmiga ah ee Twitter-ka wuxuu dhignaa sida tan:
“Hadii aan ka hadlo fikirkeyga daciifka ah, Neymar wuxuu u baahan yahay kooxda Barcelona, si uu ugu guuleysto Champions League markale”.
“Wuxuu heystaa shakhsiyad iyo tayo badan uu ku soo celin karo xiriirkii fiicnaa ee kala dhexeeyay taageerayaasha kooxda Barcelona, iyo sidoo kale inuu noqdo ciyaaryahanka ugu fiican adduunka”.
“Waxaan u maleynayaa in xulka Brazil uu ugu guuleysan doono Copa America si fudud, mana arko koox awooda inay ka badiso Brazil, gaar ahaan ka daddib marka uu Neymar soo laabto, aniga ahaan wuxuu noqon doonaa ciyaaryahanka ugu fiican tartankan”.
Warbaahinta caalamka ayaa dhowaan xaqiijisay in maamulka kooxda Barcelona ay ka fiirsanayaan dib ugu soo laabashada Neymar Jr ee kooxda, kaddib markii uu xagaagii 2017 u dhaqaaqay naadiga reer France ee Paris St Germain.